एक्कासी सिकिस्त बिरामी परेका माधव नेपाललाई भएकाे के हाे ?
September 30, 2021 N88LeaveaComment on एक्कासी सिकिस्त बिरामी परेका माधव नेपाललाई भएकाे के हाे ?
काठमाडौं । केही दिनदेखि भाइरल ज्वरोले थलिनुभएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ । अध्यक्ष नेपाल हिजो महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना हुनुभएको हो । उहाँलाई शिक्षण अस्पतालको एनेक्स-१ को क्याबिन नम्बर ५११ मा राखिएको छ । डा. सन्तोषकुमार दास अध्यक्ष नेपालको उपचारमा खटिनुभएको छ । नेपालको सचिवालयका अनुसार उहाँको […]
September 30, 2021 N88LeaveaComment on सनराइज बैंकले १५ लाखसम्मको बिना धितो लोन दिने
काठमाडौँ । सनराइज बैंकले विभिन्न संघ संस्था तथा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी वर्गलाई लक्षित गरी सनराइज पेरोल लोन योजना ल्याएको छ । यस योजना अन्र्तगत सनराइज बैंकमा सनराइज पेरोल सेभिङ अकाउन्ट भएका कुनै पनि ग्राहकहरुले बिना धितो रु १५ लाख सम्मको कर्जा लिन सक्नेछन् । योजना अनुसार ग्राहकहरुले अधिकतम २४ महिनाको तलब अथवा रु ५ लाख सम्मको […]
प्रचण्ड भन्छन् – ‘आ’त्म’ह’त्या गर्ने कि लड्ने भन्ने ठाउँमा पुगें’
September 30, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्ड भन्छन् – ‘आ’त्म’ह’त्या गर्ने कि लड्ने भन्ने ठाउँमा पुगें’
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले प्रतिक्रान्ति गरेर संसद विघटनमा गएपछि आफूसामु लड्ने कि आत्महत्या गर्ने भन्ने मोडमा पुगेको बताएका छन् । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भगत सिंहको फिल्ममा रहेको पात्र चन्द्रशेखर दुश्मनको घेरामा परेपछि अन्तिममा माटो समातेर ‘क्रान्तिको लागि यति नै गर्न सकेँ’ भन्दै आत्महत्या गरेको प्रसंग […]
हिरा र सुन मिश्रित विश्वकै महंगो साबुनको भिडियाे भाइरल, कति पर्छ मूल्य ?
September 30, 2021 N88LeaveaComment on हिरा र सुन मिश्रित विश्वकै महंगो साबुनको भिडियाे भाइरल, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौं । हामीले हात धुन या नुहाउन प्रयोग गर्ने सामान्य साबुन बजारमा पचास÷साठी रुपैयाँमा पाउन सकिन्छ । तर, विश्वकै महंगो साबुनलाई कति पर्ला ? उत्तरी लेबनानको शहर त्रिपोलीमा विश्वकै महंगो साबुन निर्माण हुन्छ, जसको मुल्य करिब साढे तीन लाख रुपैयाँ पर्छ । साबुन पनि चानचुने हैन, हिरा र सुन मिसाइएको । त्रिपोलीमा १५ औं शताब्दीदेखि […]
बादललाई अ’चानक आयो हनहन्ती ज्व’रो: एकाएक एमालेमा बादलको बरियता डाउन ?
September 30, 2021 N88LeaveaComment on बादललाई अ’चानक आयो हनहन्ती ज्व’रो: एकाएक एमालेमा बादलको बरियता डाउन ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा बादलको वरियता घटेको छ । यसअघि मर्यादाक्रममा माथी भएका बादल अहिले भने तल परेका छन् । बादलको मर्यादाक्रम उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यभन्दा तल पारिएको छ । प्रदेशको इन्चार्ज समेत रहेका बादल बिहिबार गठित बाग्मती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटीमा शाक्यभन्दा तल परेका छन् । पार्टीले ओलीपछिको सहअध्यक्ष बनाउने […]
बामदेव गौतमको सांसद पद खारेज
September 30, 2021 N88LeaveaComment on बामदेव गौतमको सांसद पद खारेज
काठमाडौँ । बामदेव गौतमका लागि खुसीको खबर आएको छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको हो । गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि बुधबार प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र […]
अबको चुनावमा एमाले पार्टी पत्तासाफ हुन्छ : मेटमणि चौधरी
September 30, 2021 N88LeaveaComment on अबको चुनावमा एमाले पार्टी पत्तासाफ हुन्छ : मेटमणि चौधरी
काठमाडाैं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले अबको चुनाव एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हार्ने र एमाले पार्टी नै पत्तासाफ हुने दाबी गरेका छन् । ‘अबको चुनावमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीका सांसदले एउटा पनि चुनाव क्षेत्र चित्न सक्दैनन्’, चौधरीले भने, ‘ओलीको लोकप्रियता शून्यमा झरेको छ । अबको चुनावमा ओली आफै चुनाव हार्छन् ।’ […]
एमालेको सिंगो जिल्ला कमिटी नै एकीकृत समाजवादीमा रुपान्तरण !
September 30, 2021 N88LeaveaComment on एमालेको सिंगो जिल्ला कमिटी नै एकीकृत समाजवादीमा रुपान्तरण !
काठमाडाैं । माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो पकड बलियो बनाउदै लगेको छ । यही क्रममा जुम्ला जिल्लाको पूरै एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा विलय भएको छ । कुल ६१ जना जिल्ला समिति सदस्यमा ५८ जना एकीकृत समाजवादीतिर ढल्किएका हुन् । दुई जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि र एकजना मनोनित सदस्यले मात्र एमालेमै बस्ने निधो […]
यी हुन् सम्भावित महिला मन्त्री
September 30, 2021 N88LeaveaComment on यी हुन् सम्भावित महिला मन्त्री
काठमाडौं। सरकारमा अहिले एकजना मात्र महिला मन्त्री छिन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ऊर्जा मन्त्री बनेकी पम्फा भुसाल ललितपुर क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । माओवादीले पहिलो चरणमै मन्त्री लाँदा महिलालाई समावेश गरेको थियो । तर, नेपाली काँग्रेसले ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री बनाइसक्दा कुनैपनि महिलालाई मन्त्री बनाएको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुष्पा भुसाललाई […]
लाइसेन्स परीक्षा मंसिरमा, आवेदन दिन पाउने व्यवस्था नयाँ !
September 30, 2021 N88LeaveaComment on लाइसेन्स परीक्षा मंसिरमा, आवेदन दिन पाउने व्यवस्था नयाँ !
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स परीक्षा) मंसिरमा हुने भएको छ। आयोगले लाइसेन्स परीक्षाका लागि तयारी तीव्र गरेको छ । आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठाले विषयगत र वस्तुगत प्रश्न तयार गर्नुपर्ने भएकाले लाइसेन्स परीक्षाका लागि समय लाग्ने हुँदा मंसिरअघि लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्भावना नरहेको बताए। आयोगको कार्यतालिकाको आधारमा रोकिएका काम अगाडि […]